गजल	By नवीन सन्देश on	२८ मंसिर २०७३, मंगलवार १२:५४
तानाबाना बुन्दा बुन्दै, बुढी होउली सानू ।
राम्रो फूल चुन्दा चुन्दै, बुढी होउली सानू । भविस्यको ठूलाठूला, कल्पना नगर भो,
मालाहरु उन्दा उन्दै, बुढी होउली सानु । मठ मन्दिरहरु पनि, दिनदिनै नधाउ भो, कथाहरु सुन्दा सुन्दै, बुढी होउली सानू । आफूसँग जे छ, त्यसैमा खुसी हुनुपर्छ, सपनाहरू गुन्दा गुन्दै, बुढी होउली सानू । मनका चाहनाहरुलाई, स्वतन्त्र छोडिदेउ,
इच्छाहरु थुन्दा थुन्दै, बुढी होउली सानू । तिलक तारामी
तपाइँकॊ प्रतिक्रिया : Related Posts ९ असार २०७४, शुक्रबार १८:५८ 0	त्यो गुलाबको फूल
२५ बैशाख २०७४, सोमबार १२:२५ 0	जलसा र विन्दुहरु सार्वजनिक
२५ बैशाख २०७४, सोमबार १२:०२ 0	घन थापाको “बयान” र “बस्ति” विमोचन
६ श्रावण २०७४, शुक्रबार ११:४८ 0
३ श्रावण २०७४, मंगलवार १०:४७ 0
उकुषाले जितिन् ‘मिस एसिया नेपाल’को उपाधि
तस्वीर	कसले सुन्ने यिनको पीडा ? नेपालमा सयौंको संख्यामा बालगृहरुभएतापनि के अर्थ छ र ? सुन्धारामा भीख माग्दै गरेकी यी बालिका ! Read More
हट नायीका सुष्मा कार्की Read More